प्रचण्ड र किरणबीचको सङ्घर्ष – eratokhabar
प्रचण्ड र किरणबीचको सङ्घर्ष
ई-रातो खबर २०७५, १६ पुस सोमबार १५:३६ January 2, 2019 507 Views
प्रचण्ड–किरणको सम्बन्धबारे पहिलो फरक बुझाइ मोहनविक्रमबाट विद्रोह गरी किरण महासचिव बनेर ३ वर्षमै महासचिव प्रचण्डलाई छोडेपछिको सन्दर्भमा थियो । पार्टीका केही पङ्क्ति र बाह्य पक्षलाई किरणले प्रचण्डलाई उत्तराधिकारीका रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका हुन्, किरण र प्रचण्डमा कुनै अन्तर छैन भन्ने परेको थियो तर प्रचण्ड र पार्टीको ठूलो पङ्क्तिमा किरणको नेतृत्व असफल भएपछि वा किरणले नेतृत्व दिन नसकेपछि प्रचण्ड सङ्घर्षसहित जितेर अगाडि आएका हुन् भन्ने थियो । वास्तविकतामा पहिलोभन्दा दोस्रो नै मुख्य देखिन्छ तर किरण आफैँ नेतृत्वबाट पछि हट्ने र नयाँमा जाँदा कसलाई महामन्त्री बनाउने भन्ने सन्दर्भमा भने प्रचण्डप्रति नै ढल्केका थिए किनकि त्यस बेला किरणपछि पालो स्वतः हुँदा सीपी गजुरेलको थियो, भक्तबहादुर वरिष्ठ भए पनि उनले त्यो अवसर पाउने सम्भावना थिएन । पार्टीमा सङ्घर्ष पनि कुनै न कुनै रूपले चल्यो । सङ्घर्षमा किरणको सहयोगका कारण प्रचण्डलाई नेतृत्वमा आउन सहज भयो । यसमा बादलको साथ पनि प्रचण्डलाई नै थियो । किरण यो सम्बन्धमा आफूले छोडिदिएको र आफ्नै सहयोगमा प्रचण्ड नेतृत्वमा आएको देखाउन चाहन्थे भने प्रचण्ड किरणलाई जितेर क्षमताका आधारमा आएको बुझाउन चाहन्थे । २०४८ पछि यसमा बाबुराम, बादलहरूको पनि समर्थन थियो । प्रचण्ड, बाबुराम, बादलहरूले पछिल्लो समयमा क्रान्तिको समस्या ‘जडसूत्रीय संशोधनवाद’ पनि हो कुनै समयमा यो अप्ठ्यारो बन्न आउने गरेको भन्दै रूपमा मोहनविक्रमतिर र भित्र किरणतिर (चौथो महाधिवेशनको लाइन भन्दै) सोझाइरहेका थिए । दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनवरपर त यसको धज्जी नै उडाइयो पार्टीमा । यसले किरणलाई पोल्नु स्वाभाविक थियो भने प्रचण्डले जसरी पनि यो सत्य बुझाउनुपर्छ भन्ने सोच्थे । प्रचण्डले यो सत्य किरणलाई नै भन्न लगाउने कलाबाजी गर्दै थिए । नेतृत्व तहमा भित्र र बाहिर पर्ने यत्ति फरकले पनि आन्दोलनका हकमा जाँदा कता हो कता धेरै तन्किनु स्वाभाविक थियो र यो तन्किरह्यो पनि । प्रचण्ड र किरणबीचको सङ्घर्षमा यो मनोभावको प्रभाव निरन्तर रह्यो । बादल कारबाहीमा पर्दा उनीमाथि चर्को प्रहार हुनुमा सिद्धान्तको खोलभित्र किरणको यो मनोदशाले पनि काम गरेको थियो । यसबारे बादल पनि स्पष्ट थिए र मौका पर्दा उनले तिखो प्रहार गर्न बाँकी राख्दैनथे ।
२०५९ सालमा दुम्ला बैठकले २१ औँ शताब्दीको जनवाद पारित ग¥यो । त्यसमा कैयौँ विषय सकारात्मक भए पनि स्टालिनमाथिको प्रहार, जडसूत्रवादमाथिको प्रहार र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मान्यतामा विशेष जोड थियो । यसका पछाडि पनि किरणतिरको सङ्घर्षको झल्को देखिन्थ्यो । किरणबारे धेरै टिप्पणी आउन थालेका थिए । जनयुद्धलाई पनि जित्न सकिँदैन भन्ने दृष्टिकोण राख्छन्, निराश देखिन्छन् भन्ने चलिरहेको थियो । पार्टीमा रूढिवाद र जडसूत्रवादबारे बहस गर्नुपर्ने र त्यो समस्यालाई हल गर्नुपर्ने भन्ने छलफल सुरु भइसकेको थियो । यो बहस चल्दै गर्दा किरण गिरफ्तार परे । उनी गिरफ्तार परेको विषयलाई पनि पार्टीमा रहस्यमय तरिकाले बुझियो । सुरुका ३ दिन कतैबाट बाहिर प्रचार नगर्ने भन्ने आयो, रूपमा हेर्दा छुटाउन सकिन्छ कि भन्ने सकारात्मक तर्क नकारात्मक दृष्टिले हेर्दा समयमै नबोलेर फसाएजस्तो देखिने भयो । गिरफ्तारी पनि किरणकै कमजोरीले भयो भन्ने बढी भयो किनकि उनी आँखाको उपचारमा गएका थिए । नेपालमा भर्खरै म्याग्दी कारबाही भएको थियो । परिस्थितिलाई बुझ्न नसकेको भन्ने भयो तर किरणको भनाइमा प्रचण्डलाई सोधेर नै उपचारमा गएका थिए । जे भए पनि किरण गिरफ्तार पर्नुमा केवल किरणको कमजोरी मात्र थिएन, त्यहाँ पार्टीभित्रको सङ्घर्षलाई ध्यान दिएर भारतले खेलेको खेल पनि थियो । गिरफ्तार नै गर्न चाहेको भए सिलगुडीमा बसेका किरणलाई भन्दा दिल्लीमा बस्ने प्रचण्ड–बाबुरामलाई सजिलो थियो । किरण यसरी गिरफ्तारीमा परेपछि उनीसँगको प्रचण्डको सङ्घर्ष त्यहीँ रोकियो । उनी गिरफ्तार नखाँदा हुन् त यो निश्चित थियो– कुनै न कुनै स्तरको सङ्घर्ष किरणसँग भइसक्थ्यो किनकि जनयुद्धको विस्तारले प्रचण्डको प्रभावलाई कसैले पनि चुनौती दिन सक्ने अवस्था नै पार्टीमा थिएन । प्रचण्डले गर्ने इशारामा पूरै पार्टी विशेषतः नयाँ पिँढी एक ढिक्का भएर सङ्घर्षमा अग्रसर हुन्थ्यो तर किरण गिरफ्तार भएपछि प्रचण्ड बेलाबखत किरणको उपस्थिति खट्किएको, बहस गर्ने शक्ति कमजोर भएको अनुभूति गर्थे र पार्टीमा कुरा हुँदा उल्लेख पनि गर्थे ।
किरण र प्रचण्डका सयौँ बैठक भए होलान् । दुई लाइन सङ्घर्ष सुरु भएपछि तर यो हल भएन र हुने अवस्था पनि थिएन । पालुङटारमा दुई लाइन सङ्घर्ष अरू चर्कियो । यसको नेतृत्व पनि किरणले नै गरे । धोबीघाटमा पुग्दा सङ्घर्ष उत्कर्षमै पुग्यो । प्रचण्ड जीवनमा पहिलोपटक अल्पमतमा पुगे तर किरण प्रचण्डलाई फेर्नेभन्दा रूपान्तरण भन्दै बसे (प्रचण्ड भएको भए नेतृत्व परिवर्तन हुन्थ्यो) । बाबुराम र प्रचण्ड मिलेर जनमुक्ति सेना विसर्जन गर्ने निर्णयमा पुगेपछि किरणकै नेतृत्वमा विद्रोह भयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–माओवादी बन्यो । यसरी प्रचण्ड र किरणको सङ्घर्ष विभाजनसम्ममा पुगेर टुङ्गियो । प्रचण्ड आफ्नो विचलनको पराकाष्ठामा पुग्दै एमालेसँग एकता गरेर जीवन धान्नेमा पुगेका छन् भने किरण विचारको दृष्टिले क्रान्तिकारी धारामा बसे पनि कार्यनीतिका दृष्टिले टाउको संसद्वादी उपयोगवादको दुलोभित्र घुसारिरहेका छन् । उनले त्यसबाट टाउको निकाल्लान् वा अकर्मण्यताको भुमरीमा अल्झिएर पुच्छर मात्र क्रान्तितिर फर्काइरहलान् ? त्यो कुरा भाबी आन्दोलनले प्रस्ट पार्ला !
(घ) प्रचण्ड र आलोकबीचको सङ्घर्ष
प्रचण्ड–आलोक समकक्षी वा सहपाठी होइनन् तर एकअर्कोका हितैषी भने पक्कै हुन् । प्रचण्ड पहिलो लहरका नेता थिए भने आलोकले आफूलाई त्यसपछिको नेता बनाउन चाहन्थे । सायद प्रचण्डको स्वभावअनुसार त्यो आश्वासन वा ढाडस दिएका थिए भन्न सकिन्छ । आलोक पनि केही क्षमता नभएका होइनन्, सामान्य परिवार र मजदुर वर्गबाट आएका, औपचारिक अध्ययन कम भए पनि विषय प्रस्तुत गर्न सक्ने र चलाखखालका मान्छे थिए । खटन–पटन पनि चुस्त प्रकारले गर्न सक्थे । त्यसै भएर पनि होला, प्रचण्डले निर्मल लामाहरूसँगको दुई लाइन सङ्घर्षमा आलोकलाई बेसी प्रयोग गरे । उनको पार्टी हैसियत पनि अन्य नेताहरूको तुलनामा छिटो उँभो लाग्योे । जनयुद्धको तयारी र पहलपछि सीपीलाई दपेट्दा पनि आलोक नै प्रयोग भए । आलोकलाई अवसर पनि दिए र पाए । जनयुद्धको तयारीमा आलोकको राम्रै तत्परता र सहयोग रह्यो प्रचण्डलाई । जनयुद्ध सुरु भएपछि उनकै नेतृत्वमा पहिलो सफल चौकी रेड पनि रामेछापको बेथानमा सफल भयो । त्यस कारबाहीले उनलाई अरू माथि उठायो । जनयुद्ध दोस्रो योजनामा उनको प्रशंसा पनि भयो । उनी क्रमशः पूर्वका नेता भए । त्यहाँसम्म प्रचण्ड र आलोकको विषय मिल्यो ।
अन्य कमान्ड वरिष्ठ नेताले हेर्दथे तर पूर्व आलोकले हेर्दथे । त्यसले उनीमा दम्भ र महŒवाकाङ्क्षा बढायो । आलोकमा नेतृत्व महŒवाकाङ्क्षा बढी देखिन थालेपछि भने प्रचण्ड उनीबाट झस्किन पुगे । आलोकले के के ग¥यो भन्ने पर्न थाल्यो । यता बाबुरामले आलोक भनेपछि फुटेको आँखाले पनि हेर्न चाहँदैनथे, उनका बारेमा उपत्यका र पूर्वबाट अनेक सूचना प्रचण्डकहाँ पुग्न थाल्यो । आलोक सुरा–सुन्दरीमा फस्यो र पार्टीमा गुट जन्मायो भन्ने खबर पार्टीमा चल्यो । प्रचण्डले नै पछिल्लोपटक यो चलाए । त्यही क्रममा बेथानको वीरता दिवस मनाउने पोस्टरमा आलोकले प्रचण्डसँगै आफ्नो कोटेसन राख्न लगाए । उनको कोटेसन थियो, ‘बलिदान क्रान्तिको ऊर्जा हो ।’ केही नेताहरूले यसलाई आलोकलाई किनारा लगाउने ठूलो मुद्दा बनाए जसले आलोकको चुरीफुरी मन पराएका थिएनन्, उनीहरूले त चर्को नै उठाए । उनले एकजना महिला कार्यकर्तासँग यौनसम्बन्ध बनाएको पनि उजुरी आयो । उता बाबुरामसँगको सङ्घर्षमा आलोक चर्को रूपले उत्रिएका थिए । उनले बाबुरामलाई ट्राट्स्की र देङसँग दाँजेर हानेका थिए । यद्यपि यसमा प्रचण्डको नै इशारा थियो । पछि आलोकको मुद्दा उठेपछि बाबुराम पनि सिस्नेकीराजस्तो उफ्रिए । उनले यति भने, ‘यो मान्छे कम्युनिस्ट नै होइन, यसले पार्टी डुबाउँछ ।’ त्यही समय २०५६ मा पार्टीमा सबै नेताहरूले आफ्नो समस्या आफैँले लेख्ने र पार्टीमा विवरण राख्ने भन्ने निर्णय गरियो । सम्भवतः आलोकलाई सीधा भन्न गाह्रो परेपछि प्रचण्डले लगाएको बुद्धि पनि हुन सक्छ । सबैले लेखेको आत्मालोचना मिल्यो तर आलोकले लेखेको आत्मालोचनामा आत्मालोचनाको भाव कम थियो । उनले त आत्मप्रशंसाजस्तो पो लेखेर ल्याएछन् । कमजोरी लेख्न उनलाई मनै लागेन वा हम्मे प¥यो । दुईपटक लेख्न लगाउँदा पनि त्यस्तै भएपछि त्यो त्यसै राखियो । त्यही समयमा हो, बाबुराम आलोकविरुद्ध बतुराएको । पछि प्रचण्ड पूर्व गएर बुझेपछि के भेटे भने आलोकले पूर्वी–ब्युरोलाई नै नियन्त्रणमा लिइसकेको रहेछ । केही नेता छोडेर आलोकका पक्षमा छन् । प्रचण्डलाई समर्थन गर्नेमा यो नै आलोकको क्षमता थियो, प्रचण्डसँग परेपछि यो उनको अपराध बन्न पुग्यो । खासमा जब आलोकलाई पूर्वबाट केन्द्रीय कार्यालय हुँदै पश्चिम सार्ने कुरा भयो, सायद आलोकको इशारामा पूर्वी–ब्युरोले यसको विरोध ग¥यो । यति पाएपछि प्रचण्ड झन् झस्किए आलोकसँग । अनि त आलोकलाई कारबाहीमै राखेर उनीविरुद्ध संश्लेषण गरियो— ‘आलोक प्रवृत्ति ।’ आलोक प्रवृत्तिका विशेषता भनेर केही बुँदाहरू बने त्यसमा मुख्य थिए ः १. चर्को क्रियाशीलता र क्रान्तिकारी लाइनको उग्रपक्षधर, नेतृत्वको चाकरी गर्ने । २. अभिव्यक्तिमा अतिरञ्जना, ससाना कुरामा झूट बोल्ने । ३. आर्थिक अराजकता र यौनकमजोरीलाई त्यागका रूपमा प्रस्तुत गर्ने । ४. माथि चाकरी तल नोकरशाही व्यवहार । ५. गुटबन्दी गर्ने । ६. द्वैतचरित्र प्रदर्शन गर्ने, निम्नपुँजीवादी, गैरकम्युनिस्ट आदि । यी आरोप पनि उनको मुखमा नलगाएर बडो षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले पहिले उनलाई फकाएर पश्चिममा सरुवा गरिएपछि मात्र भनियो । पछि आरोप थोपर्दै कारबाही गरियो र राप्तीमा पठाइयो । पछि त एकप्रकारले बन्दी बनाइयो । आलोकले प्रचण्डलाई जसरी सहयोग गरेका थिए, सायद प्रचण्डबाट यसखालको हमला र धोका होला भन्ने उनले सोचेका थिएनन् । उनी यस्तो कारबाहीबाट विक्षिप्त नै बने । बेलाबखत भाग्न पनि खोजे तर के गर्ने, उनलाई कुनै अड्कल नै भएन । उनी एकप्रकारले असहायजस्ता हुन पुगे । तैपनि राप्तीको शीतल स्वभाव र कसैलाई पनि अपमान नगर्ने संस्कारबाट उनी धानिए ।
अफसोच ! उनी सरकारी सैन्य–अप्रेसनको बेला रोल्पामा सेनाको गोलीद्वारा मारिए । उनी भाग्न चाहेको भए भाग्न पनि सक्थे । उनको सुरक्षामा रहेका कमरेडहरूले जोगाउन पनि निकै कोसिस गरेका थिए तर उनले आलटाल गरेर जोगिन मानेनन् । उनले सेनासँग के गर्न खोजेका थिए भन्न सकिँदैन तर सेनाको गोलीबाट उनी मारिए । उनकै कारणले एकजना मिलिसियाका युवा पनि सहिद भए । जनयुद्धमा रहँदासम्म आलोकलाई सहिद पनि मान्ने कुरा भएन । आलोक सेनासँग आत्मसमर्पण गरेर पार्टीविरुद्ध जान खोजेका थिऐ भन्ने तर्क पनि भए । प्रचण्डप्रतिको प्रतिशोध मानसिकताले त्यहाँ पु¥याउँदैनथ्यो भन्न पनि सकिँदैन । उनले यस्तो एक्लोपन र अपमानभन्दा बरु गोली खाएर मरौँ, जे होला भन्ने सोचेको पनि हुन सक्छन् । जे होस्, उनी सेनाबाट मारिए । पार्टी शान्तिप्रक्रियामा आएर दुई लाइन सङ्घर्ष चलिरहेको सन्दर्भमा खरीपाटी भेलापछिको सिन्धुपाल्चोक सुकुटेको स्थायी समिति बैठकले उनलाई सहिद मान्ने निर्णय ग¥यो । कैयौँ कमजोरीका बाबजुद कम्तीमा उनी सहिदसम्म बन्न पाए । कम्युनिस्टको दृष्टिकोणमा स्वर्ग र नर्क त हुँदैन तर पनि हुन्थ्यो भने उनको ‘आत्मा भड्किएको’ भए केही राहत अवश्य पाउँथ्यो ! कि प्रचण्ड दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको रक्षक, माओवादीलाई आतङ्कवादी भन्ने सत्ताको संरक्षक, सहिदहरूलाई गोलीले उडाउने राजनीतिको सञ्चालकमा पतन हुन पुगेका छन् भने आलोकले कमजोरीकै कारणले हो भने पनि कम्तीमा जनताको सहिद बन्ने सौभाग्य पाएका छन् ! यो पनि मान्न कर लाग्छ– प्रचण्ड–बाबुरामले आलोकलाई जस्ता आरोप लगाएर आलोकको मृत्युले त्यसलाई जाँच्ने मौका मिलेन तर आलोकलाई ती आरोप लगाउनेहरू नै वास्तवमा इमानदार र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट थिएनन् । उनीहरूले आलोकलाई कम्युनिस्ट कोणबाट नभई बुर्जुवा, संसद्वादी, उपभोगवादी, अवसरवादी कोणबाट लगाएका रहेछन् भन्ने भने यिनीहरूको विचलन र पतनबाट स्पष्ट हुन्छ । एक ठाउँमा माओले भन्नुभएको छ, ‘कुनै एक समयमा क्रान्तिकारी भएर पुग्दैन, आजीवन क्रान्तिकारी बन्नु वास्तविक क्रान्तिकारीको परिचायक हो ।’ प्रचण्डको हकमा पनि यही भनाइ चरितार्थ भएको छ ।
२०७५ पुस १६ गते सोमबार प्रकाशित
लुम्बिनीमा जनता जगाउँदै क्षितिज परिवार